Fiendrika : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Fiendrika : Fahasamihafan'ny versiona roa
Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Aogositra 2019 à 10:20
228 octets ajoutés , il y a 5 mois
Tsipelina sy rohy
Endrik'io pejy io tamin'ny 26 Mey 2019 à 12:20 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Aogositra 2019 à 10:20 (hanova) (esory)
(Tsipelina sy rohy)
Ny [[fiendrika|'''fiendrika''']] na [[Fiendrika|'''fitodika''']] dia toetra ara-pitsipiteny ananan'ny teny amin'ny [[sokajin-teny]] sasany, indrindra ny [[matoanteny]] (atao [[entimilaza]]), izay hita taratra amin'ny fiovan'endrik'ilay teny sy ny heviny ka mampitodika io teny io amin'ny [[Lazaina (fitsipiteny)|lazaina]]. Ny fiendrika na fitodika fantatra indrindra ao amin'ny [[fiteny]] maro dia ny [[fitodika mpanao]] na [[fiendrika mañano]] sy ny [[fitodika iharana]] na [[fiendrika anoina]]. Ao amin'ny fiteny malagasy dia mbola ahitana ny fitodika na [[fiendrika añanovana]] na toe-javatra. Arakaraka ny [[mpahay teny]] no anavahana na tsia ny atao hoe ''fitodika'' sy ''fiendrika''.
== Fiendrika sy fitodika ao amin'ny fiteny malagasy ==
Nivoatra avy amin'ny fakana tahaka ny [[fitsipiteny]] tranainy mahazatra ho an'ny fiteny eoropeana ka nankaty amin'ny fitsipiteny vokatry ny fikarohana amin'ny [[haiteny]] malagasy ny fandalinana ny amin'ny atao hoe fiendrika na fitodika ao amin'ny fiteny malagasy. Ny mpahay teny rehetra amin'izao anefa mbola tsy mitovy hevitra ny amin'izany, ka ny tena fantatra dia ny fitsipiteny araka ny [[haiteny ara-drafitra]] izay notarihin'i [[Siméon Rajaona]] sy ny fitsipiteny araka ny [[haiteny ara-piofohana]] tarihin-d[[Rabenilaina Roger Bruno]].
=== Fitodika araka an'i Siméon Rajaona ===
Tsy navahan'ilay mpahay teny Siméon Rajaona ny hoe fitodika sy ny hoe fiendrika. Araka nyAmin'io mpahay teny malagasy io dia maro ny fitodika ao amin'ny fiteny malagasy, sady tsy ny matoanteny ihany no voakasika fa ny [[reniteny]] sasany toy ny [[anarana]] sy ny [[mpamari-toetra]] koa. Naorin'ilay mpahay teny amin'ny endriky ny [[tsirinteny]] ao amin'ny matoanteny na amin'ny sokajin-d[[reniteny]]dreniteny hafa azo atao entimilaza sy ny karazana [[Fameno (fitsipiteny)|fameno]] azo atao [[Lazaina (fitsipiteny)|lazaina]] ampiarahina aminy izany fanavahana ireony karazana fitodika izany.
==== Fitodika mahakasika ny matoanteny ====
==== Ny fiendrika araka an-dRabenilaina ====
Ny fiendrika dia miankina amin'ny endriky ny [[tsirinteny]] amin'ny matoanteny tsy ampifandraisina amin'ny [[Lazaina (fitsipiteny)|lazaina]] sy ny [[Fameno (fitsipiteny)|fameno]]. Io no atao amin'ny [[Fiteny frantsay|teny frantsay]] hoe ''voix'' na amin'ny [[Fiteny anglisy|teny anglisy]] hoe ''voice''. Ireto avy ireo fiendrika ireo:
*[[Fiendrika mañano]]: ''<u>Mikapa</u> hazo amin'ny antsy ny ankizy''. ''Mitaraina ny vahoaka noho ny ataon'ny mpitondra''.
==== Ny fitodika araka an-Rabenilaina ====
Ny fitodika dia miankina amin'ny hevitry ny matoanteny mifandray amin'ny [[Vara (fitsipiteny)|vara]] sy ny fameno ary ny teny mety mampifandray ([[mpampiankin-teny]]) ny [[Vara (fitsipiteny)|vara]] matoanteny amin'ny fameno, raha atao lazaina io fameno io. Ny fitodika no atao amin'ny teny frantayfrantsay hoe ''diathèse'' fa amin'ny teny anglisy hoe ''diathesis''. Ireto avy ireo fitodika ireo izay misokajy roa:
'''1. Fitodika fototra'''
Amin'ny ankapobeny ny matoanteny amin'ny fiendrika mañano izay azo asiana fameno iharana mivantana dia afaka miova hanana [[fiendrika anoina]]. Izany hoe tsy ny matoanteny amin'ny fiendrika mañano rehetra no azo avadika hanana fiendrika anoina.
Ho an'ireo mpikaroka ao amin'ny [[haiteny ara-piofohana]] dia misampana avy amin'ny matoanteny mañano ny matoanteny amin'ny fiendrika anoina. Amin'ny fiteny sasany, ny fampitodihana ny fehezanteny amin'ny anoina dia mety hanova endrika ny teny ([[anarana]] na [[Mpisolo tena (fitsipiteny)|mpisolo]] sns) atao lazaina (ilay teny fameno ao amin'ny fehezanteny manano).
Matetika koa dia ialohavan'ny [[mpampiankin-teny]] milaza ny mpanao ny asa ilay anarana na mpisolo sns mitana ny anjara asa fameno (ilay teny nitana ny anjara asa lazaina tao amin'ny fehezanteny manano). Izany mpampiankin-teny izany dia ny hoe ''par'' ao amin'ny fiteny frantsay, ''by'' ao amin'ny fiteny anglisy, ''ab'' ao amin'ny fiteny latina sns. Ao amin'ny fiteny sasasasany dia ilaina ny fampiasana [[matoanteny mpanampy]] apetraka eo alohan'ny [[ova-matoanteny]] (''être'' ao amin'ny fiteny frantsay, ''be'' ao amin'ny fiteny anglisy, sns) nefa ny fiteny sasany tsy mila an'izany.
==== Fitodika tampody ====
Ny fiteny malagasy dia mampiasa ny teny hoe ''tena'' mba hananterana ny fitampodian'izay atao amin'ny mpanao azy nafanefa matetika tsy ilaina ianyizany. Ny fiteny anglisy kosa mampiasa ireto mpisolo tena ireto: ''myself'', ''yourself'', ''himself'', ''herself'', ''itself'', ''ourselves'', ''yourselves'', ''themselves'' mba handikana ny fitampodian'ny asa atao amin'ny mpanao azy.
==== Fitodika mpifanao na mitoina ====
Ny fiteny malagasy dia mampiasa ny [[fitodika mpifanao]] na ny [[fiendrika mitoina]] (ahitana ny tsofolka -''if''-) mba handikana io endriky ny matoanteny fratsayfrantsay io. mampiasaMampiasa ny teny hoe ''each other'' na ''one another'' ny fiteny anglisy mba handikany ny fifampitoinana.
''Ils <u>s'envoient</u> des cadeaux.'' ("Mifandefa fanomeana izy ireo")
==== Fitodika anoina na iharana ====
''Elle <u>s'en va</u>'' ("Lasa izy")''.''
=== Ny fiendrika anelanelany ===
Ny [[fiendrika anelanelany]] (izay atao hoe koa "fiendrika anelanelany anoina") dia fiendrika hita ao amin'ny fiteny indo-eoropeana (ohatra: ny [[fiteny grika taloha]] sy ny [[Fiteny sanskrity|fiteny sanskrita]] sy ny [[fiteny latina]] ary ny [[fiteny islandey]]). Ny matoanteny amin'ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika taloha dia miafara amin'ny -''ομαι'' (''-omai'') izay fiafaran'ny matoanteny amin'ny fiendrika anoina nefa tsy voatery hanana hevitra anoina.
Raha ny heviny no jerena dia ahitana azy ihany koa ny fiteny sasany ankehitriny nefa tokony hatao hoe ''fitodika'' fa tsy ''fiendrika'' izany satria mitovy amin'ny [[fiendrika mañano]] ihany. Saika hitovy amin'ny [[fiendrika tampody]] ao amin'ny fiteny frantsay izy nefa tsy mampiasa [[Mpisolo tena (fitsipiteny)|mpisolo tena]] fameno mitovy laharana amin'ny mpisolo tena misahana anjara asa lazaina. Indraindray koa dia atao hoe "fiendrika anelanelany" ny fiendrika tampody.
==== Ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika taloha ====
==== Ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny eoropeana ankehitriny ====
Ny fiteny eoropeana ankehitriny dia heverin'ny mpahay teny sy ny mpanao fitsipiteny sasany fa manana io atao hoe fiendrika na fitodika anelanelany io nefa tsy amin'ny fiendrika anoina (ny an'ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika) ny endriky ny matoanteny fa amin'ny endrikafiendrika mañano.
''The book <u>reads</u> well.''
''The trousers <u>wash</u> easily.''
''Ripe oranges <u>peel</u> well.''
''The book <u>was not selling</u>.''
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/973024"